नरिवलको तेलबाट हुन्छन् यस्ता कैयौँ फाइदाहरु !! | सुदुरपश्चिम खबर
नरिवलको तेलबाट हुन्छन् यस्ता कैयौँ फाइदाहरु !!
धेरै पहि’लावाट नै हामिले नरिव’लको तेललाई प्रयोग गदै आएका छौ । नरिवलको तेललाई विशु’द्ध प्राकृ’तिक तेलको रुपमा चिनिन्छ। यसको प्रयोग अधि’काशँ मानिसहरुले गदै आएको पाइन्छ । नरिवल तेलको सेवनले धेरै प्रकारका स्वा’स्थ्य समस्याबाट छुट्का’रा पाउन सकिन्छ ।
यसका फा’इदा पनि धेरै छन । यसले पसिना गनाउने समस्या’बाट समेत छुट्का’रा पाउन सकिन्छ। नरिवल तेलमा ‘फ्री रैडिकल्स’ पाइन्छ जसले त्वचा’लाई नरम बनाउँछ। नियमित रुपमा नरि’वल तेल त्वचामा लगाउनाले सुर्यको रो’शनीले कुनै प्र’भाव पार्न सक्दैन।
यसैकारण नरिवल तेल’लाई त्वचाका लागि राम्रो लो’शन पनि मानिन्छ। यसको तेल डायबिटी’जबाट पीडितहरुका लागि निकै फाइ’दाजनक मानिन्छ। यही का’रणले डायबिटीज रोगिका लागि नरिवल तेल हितक’र मानिन्छ। नरिवल तेलको सेव’नले पटक पटक भोक लाग्ने समस्याबाट छुट्का’रा पाउन सकिन्छ।
जसले भोक’लाई नि’यन्त्रण गर्न मद्दत पुग्छ । यसका साथै तौल घटाउन समेत मद्दत गर्छ। हाम्रो अनुहारमा डन्डि’फोरका कारण कालो दागहरु देखिन्छन्। ती कालो दा’गलाई सफा गर्न राती सुत्ने बेलामा थोरै नरिवल पानी ल’गाउने यसरी दिनै प्रयोग गर्नाले कालो दा’गलाई हटाउन सकिन्छ र रोग बाट बच्न सकिन्छ। (gnewsnepal बाट सभार)